Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Galbeedka Australia oo Shirtay
Jaaliyada Galbeedka Australia oo Shirtay
Maanta ooy taariikhdu tahay 25/8/2013 ayaa jaaliyda Galbeedka Australia waxay isugu yimaadeen shirkoodii billaha ahaa kaasoo lagaga wada hadlayay waxqabadka jaaliyda bishii lasoo dhaafay, sidookale waxaa lagaga hadlay qabashada xuska sanad guurada aad ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia oo laqaban doono 1/9/2013 hadii Alle idmo shirkan ayaa sida caadada u ah lagufuray aayadaha Quraanka Kariimka oo uu soo jeediyay Sheekh Aadan.
Kadib waxaa lagudagalay ajandihii shirka oogu balaadhnaa jaaliyada oo isu diyaarinaysa qaban qaabada iyo abaabulka xuska sanadguurada. Waxaana shirka furay gudoomiyaha jaaliyda Halgame Aaden C/raxmaan (Aadan Dakhare) halgame Aaden ayaa oogu horayn ugamahadceliyay xubnihii sida fiican ooga soo qaybgalay shirka isagoo kula dardaarmay inay dadaalkooda ay ugu jiraan sidii gumaysiga madaw ee Ethiopia ooga dulqaadaan dalkooda iyo dadkoodaba. Waxaa kaloo shirku aad usoo dhaweeyay guushi uu kudhamaaday kalfadhigii lixaad ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia ooy kasoo bexeen go’aamo dhaxalgal ah oo shacabwaynaha reer Ogadenia ay aad oogu diirsan doonaan Insha’Allah.
Gabagabadii iyo gunaanadka shirka waxaa la,isku afgartay inay sidii had iyo goor halganka heegan loogu ahaado laguna garab istaago geedi socodka halganka ay JWXO hormuudka katahay. Wuxuu shirku kudhamaaday jawi aad uwanaagsan.